सुचना/प्रबिधि – Page6– rastriyakhabar.com
रेडियो नेपालले हटायो डा. भट्टराईसँगकाे अन्तर्वार्ता
काठमाडौं । रेडियो नेपालले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग लिइएको अन्तर्वार्ता हटाएको छ। सोमबार बिहान साढे ६ बजे प्रत्यक्ष प्रसारण भएको डा. भट्टराईसँगको अन्तरसंवाद कार्यक्रमको हटाएको हो । समचार प्रमुख डा. नवराज लम्सालले भट्टराईसँग कुराकानी गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टीका नेता समेत..
सातै प्रदेशका विज्ञान प्रविधि मन्त्रीहरूबीच अनलाइन वार्ता
काठमाडाैं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा सातवटै प्रदेशका विज्ञान तथा प्रविधि विषय हेर्ने मन्त्रीहरु बीचमा अनलाइन बैठक भएकाे छ । काेराेनाभाइरस संक्रमणको महामारीको विषयलाई केन्द्रमा राखी आगामि दिनमा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रलाई कसरी अगाडी वढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा..
काठमाण्डौ । नेपाल परिवार दलले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइसरले सत्य तथ्य खबर सम्प्रेषणका लागी फिल्डमा खटिने पत्रकारहरुका लागी आवश्यक पर्ने सुरक्षा सामग्री पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघलाई प्रदान गरेको छ । आईतबार पत्रकार महासंघको कार्यलयमा नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एवम्..
मानिसको दैनिक जीवनसंग सबैभन्दा आवश्यक बस्तु बनेको छ मोवाइल । संसारका मात्रै होइन नेपालका पनि करीब करीब ८० प्रतिशत मानिसहरुमा मोवाइलको पहुच छ । यो संख्या आउने बर्षमा अझ बढ्नेमा दुईमत छैन । तर यसको अति प्रयोग वा अव्यवस्थित प्रयोग मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएको अध्ययनहरुले देखाएको छ..
सुरक्षित ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण गराउने वातावरण बनाउन महासङ्घको माग
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलन नदिन ‘लकडाउन’का समयमा सुरक्षित ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण गराउने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै असहज परिस्थितिका बीच अनेकौँ कठिनाइ र जोखिम मोलेर नागरिकलाई सुसूचित गराउने..
पत्रकार महासङ्घद्वारा संचारकर्मीलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घले कोभिड–१९ को जोखिमका बेला पनि नियमितरुपमा समाचार सेवा प्रवाह गरिरहेको संचारकर्मीहरुलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको छ । महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टको नेतृत्वमा आएको टोलीले काठमाडौं उपत्यकाका संचार गृहमा पुगेर स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो ।..
सूचना विज्ञ अलीलाई बर्खास्त गर्ने प्रम ओलीको तयारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना सूचना विज्ञ अस्गर अलीलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेका छन् । अलीले प्रधानमन्त्री ओलीको सूचना प्रबिधि सल्लाहकारको रुपमा काम गर्दै आएका छन् । अलीको लगानी रहेको सिरान टेक्नोलोजीमाथि काठमाडौं प्रेस डटकम नामक न्यूज पोर्टल ह्या,क गरेको र आफूविद्धको समाचार..
कोरोना भाइरस लगायत विषयमा भ्रम र अफवाह फैलाएको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले १७ वटा अनलाइन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। काउन्सिललले ३६ वटा अनलाइनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तीमध्ये १७ वटा अनलाइन नेपालमा खोल्न नमिल्ने गरी बन्द गर्न प्राधिकरणले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको हो। चैत १० देखि..
३२१०० नम्बर डायल गरे थाह पाइन्छ कोरोनाबारे सम्पुर्ण जानकारी
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले कोरोना भाइरस सम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले ३२१०० नम्बर डायल गरी सुन्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । टेलिकमले ‘एनटी सूचनाको संसार’ सेवामार्फत कोभिड–१९ बारे जानकारीमूलक सामग्री आफ्नो मोबाइलमार्फत ३२१०० नम्बर डायल गरी निःशुल्क सुन्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । उक्त नम्बरमा..
विद्युतीय हाजिर नगर्न अनुरोध
मङ्लबार, चैत्र ४, २०७६ मा प्रकाशित
भद्रपुर। कोभिड–१९ सङ्क्रमणको त्रासका कारण झापाका दुई स्थानीय तहले विद्युतीय हाजिर नगर्न सूचना जारी गर्दै कर्मचारीलाई अनुरोध गरेका छन् । मेचीनगर नगरपालिका र भद्रपुर नगरपालिकाले सूचना नै जारी गरेर कोराना भाइरसको सङ्क्रमणलाई दृष्टिगत गरेर नगरपालिका मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयका कर्मचारीलाई..
सोमवार, फाल्गुन १२, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले आफ्ना प्रयोकर्तालाई पैसा बाढ्ने नीति लिएको छ । फेसबुकले प्रयोगकर्तालाई भ्वाइस रेर्कडिङ्ग गरेबापत पैसा दिने भएको हो । कम्पनीले भ्वाइस रिकग्निशन टेक्नोलोजीलाई सुधार गर्न यस्तो गर्न थालेको हो । डाटा प्राइभेसीसँग जोडिएको फेसबुकको प्रभावकारीता हाल सबैमाझ..
शुक्रबार, फाल्गुन ९, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्रीको समेत सजम्मेवारी पाएका छन् । निवर्तमान मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नैतिकताका आधारमा बिहीबार राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत अर्थमन्त्री डा. खतिडालाई दिएका हुन् । यस्तै..
चिनियाँ दूतावासको विज्ञप्तिप्रति नोजाको आपत्ति
बिहिबार, फाल्गुन ८, २०७६ मा प्रकाशित
कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको अंग्रेजी पत्रिका ‘द काठमान्डु पोष्ट’मा प्रकाशित एउटा लेखबारे काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय अनलाइन पत्रकार संघले आपत्ति जनाएको छ। चिनियाँ राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिप्रति संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। ‘प्रकाशित..
गुगल क्रोम असुरक्षित, यसकारण चोरिन सक्छ तपाईको डाटा
काठमाडौं । गुगल क्रोम वेब ब्राउजरमा डाटा असुरक्षित रहेको तथ्य फेला परेको छ । हालसालै गुगलले आफ्नो वेब स्टोरबाट ५ सय खतरनाक एक्सटेन्शनलाई हटाएको छ । यी क्रोम एक्सटेन्शनहरुले अट्याकरहरुका लागि ब्राउजर डाटा चोरी गर्ने टूलको रुपमा काम गर्दै आएका थिए । यी एक्सटेन्शन्स माल्भटाइजिग र एड फ्रड कम्पनीको..
मोबाइलको भारब्रेसनले निम्त्याउँछ त स्वास्थ्य समस्या
सोमवार, माघ २७, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । मोबाइल फोनको अधिक प्रयोग स्वास्थ्यका लागि घातक मानिन्छ । धेरै मोबाइल चलाउँदा टाउको दुख्ने आँखा दुख्ने जस्ता समस्या पनि देखिन्छन पनि । अझ मोबाइलको भाइब्रेसनले स्वास्थ्यमा नपुंशक हुने, क्यान्सर हुने भन्नेजस्ता हल्ला पनि चलेका सुनिन्छन । तर के वास्तविकता त्यस्तै हो त ? फोनको रेडियसनसँग..